Superplasticizer dabeere naphthalene
Onye na -emepụta aliphatic superplasticizer
onye na-egbu oge-sodium gluconate
Dị ka anyị niile maara, polycarboxylate superplasticizer bụ ihe na -eme ka ọgbọ dị ọhụrụ. Ọ nwere ike iru ogo 30% na -ebelata mmiri na usoro onunu ogwu 0.2% ruo 0.3%. Iji rute nha 20%nke mmiri, usoro onunu ogwu maka sodium naphthalene formaldehyde ga-adị gburugburu 0.8%-1%. Ọnụ ọnụ maka polycarboxylate superplasticiz ...
Okwu Mmalite Maka Ihe Mgbasa Ozi
Ịghọta Ihe Mgbasa Ọsọ - Ihe ngwakọta ihe dị mgbagwoju anya mana ọ dị ezigbo mkpa ịghọta ihe ngwakọta dị na ihe ha na -eme. Admixtures bụ ihe dị na kọmpụta nke na -abụghị ihe ciment hydraulic ciment, mmiri, nchịkọta ma ọ bụ eriri rein ...
Ụdị polycarboxylate superplasticizer ọhụrụ
N'oge a, ọtụtụ iwu na -amalite imepụta. Anyị na -ebupụ na mba ofesi ma na -ebunye ya Chinese readymix osisi osisi, batching osisi na ndị ọzọ. Ugbu a, onye na -ahụ maka teknụzụ anyị na -emepụta polycarboxylate superplasticizer. Uru ya bụ ndị ahịa na -eji polycarboxylate superpl ...
Kedu ihe bụ polycarboxylate superplasticizer? Kedu uru ọ bara itinye ya na mpaghara ihe owuwu?
Polycarboxylate superplasticizer bụ ọgbọ nke atọ nke superplasticizer arụmọrụ dị elu mepụtara mgbe onye na -ahụkarị superplasticizer nke osisi osisi nọchiri anya ya na superplasticizer nke usoro naphthalene nọchiri anya ya. Polycarboxylate dabeere superplasticizer bụ cur ...
Ojiji nke Chengli Sodium Lignosulfonate
Sodium lignosulfonate, nke a na -akpọkwa lignosulfonic acid sodium salt, bụ ihe anionic surfactant nke pulp osisi mere, nwere oke molekul na obere ọdịnaya shuga. Dị ka ihe na -agbaze agba nke ọgbọ mbụ, Chengli sodium lignosulphonate nwere atụmatụ nke ntụ ntụ dị ala, ọdịnaya gas dị ala yana ngwa mmegharị siri ike ...
Iji meziwanye ihe arụ ọrụ, ike mkpakọ na njigide njigide dara ada, osisi ihe na -agbakwunyekarị ngwakọta. E nwere ọtụtụ ụdị: onye na -ebelata mmiri, onye na -eme mgbapụta, onye na -egbu ihe, onye na -emebi ihe, onye na -eme ngwangwa, onye na -egbochi mmiri, onye na -ahụ maka ikuku, onye na -egbochi ihe mgbochi wdg.
Kedu ihe bụ Sodium Gluconate, kedu ka anyị ga -esi jiri ya?
A makwaara sodium gluconate dị ka nnu sodium nke gluconic acid. Ọ bụ ntụ ntụ ọcha, anaghị egbu egbu, dịkwa mma na nkwụsi ike ọkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na -agbaze nke ukwuu na mmiri, na -agbaze ntakịrị na mmanya, anaghị agbaze na ether. Ọ na -arụ ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ akụkụ dịka iwu ụlọ, akwa akwa ...
Nsogbu na ngwọta dị n'iji mgbakwunye polycarboxylate
Site n'iji ngwa mgbakwunye polycarboxylate, ọtụtụ nsogbu ngwa na -abịa n'ihu anyị. Taa anyị ga -atụle ihe bụ nsogbu ndị a yana otu esi edozi nsogbu ndị a. 1, ole mmiri na ciment ka anyị kwesịrị ịgbakwunye ka anyị jisịrị ihe mgbakwunye polycarboxylate Polycarboxylate ...
Sodium Naphthalene sulfonate bụ otu ụdị ngwakọ ihe na -arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ntụ ntụ aja aja na -acha odo odo. Mgbakwunye a abụghị mmetọ, omume gburugburu ebe obibi, yana adịghị egbu egbu. Ọ na -agbaze n'ime mmiri n'ụzọ dị mfe, nwee arụmọrụ kwụsiri ike. Uru pụrụ iche gụnyere ịrụ ọrụ dị elu, ịbelata mmiri dị elu ...
site na nchịkwa na 21-04-08
Polycarboxylate superplasticizer bụ thlat generation ihe superplasticizer nke na -aga n'ihu sitere na ụdị calcium calcium na naphthalene superplasticizer. Polycarboxylate superplasticizer bụ ihe eji agbanwe superplasticizer nke teknụzụ ọhụrụ nyochara.it bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ envi ...
Ọdịiche dị n'etiti ụdị mbenata polycarboxylate superplasticizer na ụdị njigide dara
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -emepụta ngwakọta mmiri nwere mmiri na -ebelata ụdị polycarboxylate superplasticizer na ụdị njigide dị nro, mana kedu ihe dị iche n'etiti ha? Mgbe ihe siri ike dị ka ciment, mkpokọta na ájá zuru oke, naanị mmiri na -ebelata ụdị polycarboxylate superplasticizer ga ...
Nchedo gburugburu ebe obibi na -emetụta ihe ngwakọ ihe
Otu onye ahịa anyị jụrụ m: 'kedu ka mmepụta gị si aga? Ọ ka dị mma? nke ahụ na -eme ka m ghọta na China Nchedo gburugburu ebe obibi enweela nnukwu mmetụta na ngwaahịa kemịkalụ dị ka ngwakọta ihe na China. Ka m webatara gị site na mbido. Dị ka anyị niile maara, China na -etolite ngwa ngwa ...